Islaamiyiin xag jir ah oo dalkan uga socdaaley Suuriya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Islaamiyiin xag jir ah oo dalkan uga socdaaley Suuriya
La daabacay måndag 15 april 2013 kl 10.50
Ugu yaraan dadyoow soddomeeyo tiradoodu gaarsiisan yihiin laguna maleeyneyo iney yihiin islaamiyiinta xag-jirka ah ayaa dhowaantan ka amabaxey Iswiidhen una socdaaley dalka Suuriya, sidii ey uga garab dagaalami lahaayeen kooxaha taabac-san Al-qaacida ee carrigaa ka dagaalama, sida ay sheegtay hayadda nabad-sugidda ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaanno Säpo.
Hayadda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dalkan sidoo kale ey ka badbaadisay dhowr ku tala-gallo fallal argagixiso sannadihii ugu dambeeyey.
War-bixinta hayadda nabad-sugidda oo isniinta la soo ban-dhigay ayay ku qeexan tahay iney jiraan soddomeeyo islaamiyiin ah oo u amba-baxey dalka Suuriya sidii ey tababar ugu soo qaadan lahaayeen ama uga garab-dagaalami lahaayeen kooxaha xag-jirka ah, hase yeeshee ey tiradu intaa ka badnaan karto, sida ay sheegtay hayadda Säpo. Waxaa kaloo ay hayaddu shaaca ka qaadey iney aad ugu yar yihiin dadyoowgaasi kuwa asal-haan ka soo jeeda dalka Suuriya, waana mid caddeeneysa in falkaasi uu salka ku hayo aaminaad caqiido iyo aydiyooloojiyad. Hayadda nabad-sugidda Säpo ayaa horey u shaacisay iney Iswiidhen ku sugan yihiin dadyoow gaarsiisan 200 oo ah islaamiyiin xag-jir ah.
Marnaba indhaha ka qaadi meeyso Säpo sidii ay ula socon lahayd isku dayga falalka argagixis-nimo oo ey ku tallaab-sadaan ama ku talaab-san karaan dadyoowga xag-jirrada ah ee kala taabac-san idiyooloojiyada kala duwan.